Usoro eji - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
(Dịka nke 02 / 05 / 2018)
Mmadụ Bịa ka "Ihe kachasị mma EA'S | Ndị na-aga ozi ọma Ugboro ala " mkpokọta weebụ (BESTFOREXEAS) nke na-enye ndị ọrụ ọrụ ikpo okwu a pụrụ ịdabere na ya iji chọpụta ebe zuru okè na ndị na-ere ahịa ka ime ihe omume gị bụrụ ihe a na-echefu echefu. Usoro na ọnọdụ ndị a na-esonụ na-emetụta ma ị na-ele ma ọ bụ jiri weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ site https://www.bestforexeas.com
Biko gbalịa iji nlezianya tụlee okwu ndị a. Site na ịnweta ma ọ bụ na-eji usoro ma ọ bụ ọrụ BESTFOREXEAS, ị na-egosi nkwekọrịta gị na Usoro na Ọnọdụ ndị a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Okwu ndị a, ịnwere ike ịnweta ịnweta weebụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri usoro BESTFOREXEAS ma ọ bụ ọrụ.
BESTFOREXEAS na-asọpụrụ nzuzo nke ọrụ ya niile. Anyị ji nlezianya chebe nzuzo na nzuzo gị. Anyị ghọtara na ndị ọbịa niile na weebụsaịtị anyị nwere ikike ịmara na ha agaghị eji data ha onwe ha mee ihe maka nzube ọ bụla ha na-atụghị anya ya, ha agaghị abanye n'aka ndị ọzọ.
Anyị na-amalite iji chebe nzuzo nke ozi niile ị na-enye anyị, ma nwee olileanya na ị ga-agbaso.
Usoro anyị na Amụma Nzuzo na-akwado US, na iwu UK na-emejuputa, tinyere nke iwu EU Nyere Nchedo Data (GDPR) chọrọ. Iwu chọrọ ka anyị kọọrọ gị banyere ikike gị na ọrụ anyị nyere gị maka ịhazi na nchịkwa data nkeonwe gị. Anyị na-eme nke a ugbu a, site na ịrịọ ka ị gụọ ozi enyere na www.knowyourprivacyrights.org
Ewezuga dị ka edepụtara n'okpuru, anyị anaghị eso, ma ọ bụ na-ere, ma ọ bụ kpugheere ndị ọzọ, ozi ọ bụla anakọtara site na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
BESTFOREXEAS guzobere na 2011 site n'aka otu ndị ahịa nke ndị ahịa, nke na-enye ngwọta kachasị mma maka ahia na Forex Market.
Ịzụ ahịa Forex siri ike ma anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ Best Forex EA dịka mkpa gị. Ọtụtụ ahịa ahịa na-eji ọtụtụ afọ agafe ahịa na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe ihe ịga nke ọma, mana anyị na-enye usoro ihe ndekọ nke a na-egosi nke ọma iji jide n'aka na ndị a Forex Robots ga-enye aka n'ezie ịkwalite mmeri azụmahịa gị.
BESTFOREXEAS na-enye gị nyocha na nsonaazụ sitere na karịa 300 + FX ọkachamara ọkachamara.
Ịdebanye aha; ỤLỌ NA-EKWU ỤLỌ NA NTỤKWU ỤLỌ ANYỊ
Ịkwesịrị ịdịkarịa ala 18 afọ ịdebanye aha ma jiri ngwaahịa BESTFOREXEAS na ebe nrụọrụ weebụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke na-ejikọta na ebe nrụọrụ weebụ BESTFOREXEAS iji chọpụta ozi, mkpuchi mkpuchi mkpuchi, akara na ihe ọ bụla cryptocurrencies, ọ ga-emerịrị akaụntụ ahaziri na weebụsaịtị anyị nke gụnyere aha zuru ezu na adreesị ozi-e gị iji nweta ebe nrụọrụ weebụ BESTFOREXEAS. na ịnata ozi nkwado site na BESTFOREXEAS.
Ị kwenyere iji gwa anyị ozugbo banyere iji iji data nkeonwe gị n'enweghị ikike. Otú ọ dị ị kwenyere na BESTFOREXEAS agaghị enwe ụgwọ maka ụgwọ ọ bụla, ọnwụ, ma ọ bụ mmebi nke sitere na iji aha gị na adreesị ozi-e na-akwadoghị.
NDỊ ANYỊ NA-AGBANYE NDỊ ANYỊ NA-ANYỊ N'ANYE ANYỊ
Ndị nke atọ nwere ike ịkpọsa na ebe nrụọrụ weebụ anyị. N'ime ya, ndị ahụ, ndị ọrụ ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ maka ha nwere ike iji teknụzụ nke na-anakọta ozi gbasara gị mgbe niile mgbe a gosipụtara mgbasa ozi ha na weebụsaịtị anyị.
BESTFOREXEAS enweghị njikwa na teknụzụ ndị a ma ọ bụ data nke ndị a na-enweta. N'ihi nke a, nchọpụta nzuzo a anaghị ekpuchi omume ọmụma nke ndị ọzọ.
ỤMỤTA NA NKWUKWỤKWỌ NDỊ NA-EKWUKWU NDỊ ỌZỌ
Nke a bụ ozi nyere gị site n'ikike gị dị ka onye mmekọ nke anyị ma ọ bụ dịka onye mmekọ azụmahịa. Ọ na-enye anyị ohere ịmata ndị ọbịa na ị zoro aka na anyị, ma nye gị ụgwọ maka ọrụ ndị dị otú ahụ. Ọ na-agụnye ozi nke na-enye anyị ohere ịnyefe ọrụ gị.
BESTFOREXEAS anaghị eji maka nzube ọ bụla. BESTFOREXEAS na-agba mbọ iji chekwaa ozi nzuzo na nke usoro mmekọrịta anyị. Anyị na-atụ anya na onye mmekọ ọ bụla ma ọ bụ onye mmekọ ga-ekweta na ị ga-agbaso iwu a.
NTỤTA NKE Ihe ọmụma anyị na-ejikọta site na usoro mgbe ị hụrụ na anyị na ebe nrụọrụ weebụ
Kuki bụ obere faịlụ ederede nke na-etinye na draịvụ ike kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ha na-ahapụ ozi achọtara n'otu ibe weebụ iji chekwaa ruo mgbe ọ dị mkpa iji ya na onye ọzọ, na-enye ohere maka ebe nrụọrụ weebụ iji nye gị ahụmịhe ahaziri na onye nwe ụlọ na ọnụ ọgụgụ banyere otú i si eji weebụ mee ka ọ dị mma.
Ụfọdụ kuki nwere ike ịnwụ maka oge akọwapụtara, dịka otu ụbọchị maọbụ ruo mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị. Ndị ọzọ na-adịru mgbe ebighị ebi.
Ihe nchọgharị weebụ gi kwesiri ikwe ka ihichapu ihe obula i choro. O kwesịkwara ikwe ka ị gbochie ma ọ bụ mechie ha iji.
Ebe BESTFOREXEAS jiri kuki. A na-etinye ha na ngwanrọ nke na-arụ ọrụ na sava anyị, na site na ngwanrọ nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ anyị na-eji.
Mgbe mbụ ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị, anyị na-ajụ gị ma ị chọrọ ka anyị jiri kuki. Ọ bụrụ na ịhọrọ ịghara ịnakwere ha, anyị agaghị eji ha maka nleta gị ma ọ bụrụ na ịdekọ na ị kwenyeghị iji ha maka nzube ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị họrọ ịghara iji kuki ma ọ bụ ị gbochie iji ha site nchịkọta ihe nchọgharị gị, ị gaghị enwe ike iji ọrụ niile nke weebụsaịtị anyị.
Anyị na-eji kuki na ụzọ ndị a:
Iji mara otú ị si eji ebe BESTFOREXEAS anyị
Ka ịdekọ ma ị hụla ozi ụfọdụ anyị na-egosipụta na weebụsaịtị anyị
Iji mee ka ị banye na saịtị anyị
Iji dekọọ azịza gị maka nyocha na ajụjụ ndị dị na saịtị anyị mgbe ị mechara ha
Iji dekọọ mkparịta ụka mgbe a na-akparịta ụka na ìgwè egwuregwu anyị
Ị kwenyere ma kweta na BESTFOREXEAS na ndị ikikere anyị na-ejigide ikikere ikike niile nke ikike nke ụdị ọ bụla metụtara BESTFOREXEAS website, gụnyere ikikere nwebisiinka, ụghalaahịa na ikike ndị ọzọ.
Njikọ njikọ ndị ọzọ na aha ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na saịtị BESTFOREXEAS bụ ụghalaahịa nke ndị nwe ha. BESTFOREXEAS debere ikike niile a na-ekwughị n'ụzọ doro anya nye gị n'okpuru nkwekọrịta a.
ANYỊ GA-EME EMAIL Ị GA-EKWU NDỊ ỌZỌ
Nkwukọrịta nke sitere na BESTFOREXEAS email na usoro ozi, agaghi abughi iwu iwu nye BESTFOREXEAS ma obu ndi ozo, ndi oru, ndi oru ma obu ndi nnochite anya na onodu obula ebe choro ka BESTFOREXEAS choro nkwekọrịta ma obu iwu ma obu iwu.
Onye na-achịkwa iwu (Iwu)
Ịzụ ahịa Forex nwere ike ịgụnye ihe ize ndụ nke ọnwụ karịa nkwụnye mbụ gị. Okwesighi ekwesiri maka ndi oru ego nile ma i ghaghi ijide n'aka na i gh ota ihe ize ndu ahu bu, choro nduzi onwe gi ma oburu na odi mkpa. Ihe ndekọ akaụntụ Forex na-enye ụdị ọkwa dịgasị iche iche ma nwee nnukwu uru bara uru site na nnukwu ihe ize ndụ dị elu.
Ikwesighi itinye ihe ize ndụ karịa ka ị kwadebere maka ịlafu na ị kwesịrị iji nlezianya tụlee ahụmahụ ịzụ ahịa gị.
Ahụmahụ gara aga na nchịkọta nchịkọta adịghị mkpa egosiputa arụmọrụ n'ọdịnihu. Ihe niile dị na saịtị a na - anọchite anya otu echiche nke onye edemede ahụ ma ọ bụghị iwu akwadoro ịzụta ihe ọ bụla na - akọwapụta n'ime ebe a.
Gọọmenti Gọọmenti chọrọ ka onye uweojii
Ịzụ ahịa mgbanwe nke mba ọzọ na-eburu ọnọdụ dị elu, ma ọ gaghị abụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị investors. Ogologo ugo elu nwere ike ịrụ ọrụ megide gị nakwa maka gị. Tupu ị na-ekpebi itinye ego na mgbanwe mba ọ bụla, ị ga-akpachara anya nyochaa ihe omuma gị, na agụụ ihe ize ndụ gị. Ohere nwere ike ịdị na ị nwere ike ịnagide ụfọdụ n'ime ego mbụ gị ma ọ bụ ihe mbụ ị na-etinye na ya, n'ihi ya, ị gaghị etinye ego na ị gaghị enwe ike ida.
Ị kwesịrị ịma na ihe ize ndụ gụnyere na ahia ahia mgbanwe, ma chọọ ndụmọdụ sitere n'aka onye ndụmọdụ ego ego nwere onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla. Ghọta nke a; ozi dị na nke a abụghị ọkpụkpọ òkù ịzụ ahịa ọ bụla.
Ịzụ ahịa na-achọ ịnweta ego iji na-achọ inweta uru n'ọdịnihu. Nke ahụ bụ mkpebi gị. Echela ego ọ bụla ị na-agaghị emeli. Akwụkwọ a anaghị echebara ego na ọnọdụ nke onye ọ bụla aka. A na-ezubere ya maka nkuzi nkuzi ma ọ bụghị dị ka ndụmọdụ onye ọ bụla.
Emela na nke a na-enweghị ndụmọdụ site na ulo oru ego gị ma ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka ego, onye ga-enyocha ihe kwesịrị ekwesị maka mkpa gị na ọnọdụ gị. Ịchọ ịchọ ndụmọdụ ọkachamara zuru ezu tupu ịme ihe pụrụ iduga gị ime ihe megidere ọdịmma nke gị & nwee ike ibute ọnwụ nke isi obodo.
BESTFOREXEAS PRODUCTS & WEBSITE, ANYỊ GA-EBIRI "BAỊBỤ," N'AKWUGHỊ NDỊ ỌZỌ KWESỊRỊ. Na-amachighi nke, BESTFOREXEAS expressly disclaims ALL warranties, MA Express, echiche OR statutory, banyere anyị na website ngwaahịa ma ọ bụ ọdịnaya gụnyere enweghị mmachi BỤLA akwụkwọ ikike MERCHANTABILITY, Mma maka otu nzube, ISIOKWU, Nche, nke ziri ezi na na na-abụghị ịda iwu.
Na-amachighi nke, BESTFOREXEAS eme mba akwụkwọ ikike OR onodi na ohere ma ọ bụ na-arụ ọrụ anyị na website OR ọdịnaya ga-Iweputa ma ọ bụ njehie FREE. Unu iche nduduọhọ na n'ihe ize ndụ OF ọnwụ n'ihi unu na nbudata na / ma ọ bụ jiri nke faịlụ, OZI, ngwaahịa, ọdịnaya ma ọ bụ ọzọ na ihe onwunwe enwetara site na anyị na website. ỤBỌDỤ NDỊ ỌZỌ NA-EBE EKWUKWU NDỊ NA-EKWU NDỊ NA-AGBANWE YA, NWEE NDỊ A GA-EBE YA EBE YA.
Unu onwe unu na-enyerịrị na:
Unu na nanị ajụjụ maka ihe niile nke nkwukọrịta gị NA mmekọrịta Ukwu na ndị ọrụ ndị ọzọ nke BESTFOREXEAS weebụsaịtị na ọrụ na ndị ọzọ ahụ na onye ị na-EKWURỊTA OKWU OR ekwukọrịta AS A N'ihi ojiji nke BESTFOREXEAS nrụọrụ weebụ ma ọ ngwaahịa, gụnyere, na-enweghị mmachi, ANYỊ NA-AGBANYE NA NTỊ NKE NDỊ ANYỊ NA-AGBANYE Ọ BỤ NDỊ NA-EME YA N'ỤLỌ NTỊ KWESỊRỊ ỌZỌ.
Ị BỤGHỊ BESTFOREXEAS BỤGHỊ SITE NA NTỤKWỌ NDỊ ỌTỤRỤ NKE NDỊ NA-AHỤ, NDỊ MGBE Ọ BỤRỤ ỌTỤRỤ BESTFOREXEAS KWESỊRỊ KWURU OZI ỌZỌ NA-EBE BESTFOREXEAS KWESỊRỊ IKE NTỌ NKE njikọ, njikọta na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ BESTFOREXEAS.
BESTFOREXEAS eme NO oyiyi OR warranties AS àgwà ọzọ njikọ, ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ọzọ NKE BESTFOREXEAS weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ha ndakọrịta na ọ bụla ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu ọrụ ma ọ bụ mgbere NKE BESTFOREXEAS nrụọrụ weebụ ma ọ ngwaahịa.
Unu mere ekweta ỊNARA UCHE anya niile nkwukọrịta na mmekọrịta ndị ọrụ ndị ọzọ nke BESTFOREXEAS website na ngwaahịa na ndị ọzọ ahụ na onye ị na-EKWURỊTA OKWU OR ekwukọrịta AS A N'ihi ojiji nke BESTFOREXEAS nrụọrụ weebụ ma ọ ngwaahịa.
Na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị iche iche ghara ịdị na ya
Enweghị ihe ọ bụla n'ime nkwekọrịta a ga:
Debe ma ọ bụ wepu ụgwọ ọ bụla maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ onwe onye site na nleghara anya;
Debe ma ọ bụ wepu ọ bụla ibu maka wayo ma ọ bụ aghụghọ ụgha;
Debe ụgwọ ọ bụla ọ bụla n'ụzọ ọ bụla a na-enyeghị iwu n'okpuru ya; ma ọ bụ
Wepu ụgwọ ọ bụla ọ bụla a na-agaghị ewepụ n'okpuru iwu dị.
Mgbanwe NKE MGBE OZI
BESTFOREXEAS nwere ike imelite akwukwọ ojiji nke a site n'oge ruo n'oge dika o choro. Okwu ndị metụtara gị bụ ndị edepụtara na ebe nrụọrụ weebụ anyị n'ụbọchị ị na-eji ebe nrụọrụ weebụ anyị. Anyị na-enye ndụmọdụ ka ịgụrụ akwụkwọ a nke ọma ma ọ bụ iji bipụta otu maka ihe ndekọ gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere Usoro nke Jiri, biko kpọtụrụ anyị site na email na [Email na-echebe]
Ọ bụrụ na ejirila akụkụ ọ bụla nke Agreement a ghara ịdị irè ma ọ bụ ghara imeri ya, akụkụ ahụ nke Agreement ahụ ga-eme ka ọ dịka iwu kwekọrọ. Ihe ndị fọdụrụnụ ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke. Akwụsịghị ọdịda nke BESTFOREXEAS iji mezuo ndokwa ọ bụla nke nkwekọrịta a agaghị a ga-eleghara anya nke ikike anyị iji mezuo ndokwa dị otú ahụ. Anyị ikike n'okpuru nke a Agreement ga-adị ndụ ọ bụla nchupu nke a Agreement.
Ị kwenyere na ihe ọ bụla metụtara ihe metụtara ma ọ bụ na-esite na mmekọrịta gị na BESTFOREXEAS aghaghị ịmalite n'ime otu afọ mgbe arụ ọrụ gasịrị. Ma ọ bụghị ya, a ga-egbochi ihe omume dị otú ahụ kpam kpam.
Ị BỤRỤ NA Ị GỤTA NDỊ ỤLỌ NKE NTỤWWERE NA-AHỤGHỊ ỤLỌ, NA A GA-EBE EBE NDỊ A. Gị n'ihu ekweta na BESTFOREXEAS Usoro ojiji Ọnụ na Nzuzo-anọchi anya ndị zuru ezu na Nanị Nkwupụta nke nkwekọrịta n'etiti US na nke IT SUPERSEDES BỤLA amaghị OR tupu nkwekọrịta Oral OR dere, ihe ọ bụla ọzọ na nkwukọrịta n'etiti US metụtara isiokwu okwu N'ỤLỌ NCHE A.
Copyright (c) 2018 (s) nke mbụ BESTFOREXEAS
N'okpuru ndokwa doro anya nke usoro okwu ndị a
Anyị, tinyere ndị ikikere anyị, nwe ma na-achịkwa ikike nwebisiinka na ikike ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi na weebụsaịtị BESTFOREXEAS na ihe dị na weebụsaịtị anyị; ma
Niile nwebisiinka na ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ na weebụsaịtị BESTFOREXEAS na ihe ndị dị na weebụsaịtị anyị.
IKPE NA NJIRI
Ejikọtara Usoro anyị iji mezuo iwu nke mba ọ bụla ma ọ bụ ikike iwu kwadoro nke anyị na-achọ ịme ahịa. Ọ bụrụ na i chere na ọ gaghị emezu iwu nke ikike gị, anyị ga-achọ ịnụ gị.
Otú ọ dị, n'ikpeazụ ọ bụ ịhọrọ ma ịchọrọ iji ebe nrụọrụ weebụ anyị.